Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ifama ibuyise imali yam yerenti | Ezezimali
Omnye wemibuzo abantu abaninzi abanayo ngulo Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza irhafu ibuyise imali eseleyo kwi-statement endiye ndayifumana? Nangona ifama ithembisa ukuba imali izakubuyiswa kwithuba leentsuku ezi-5, abantu abaninzi balinda ixesha elide ukonwabela imali yabo.
Namhlanje siza kuchaza ukuba kutheni le nto isenzeka
Rhoqo ngonyaka, uninzi lwabantu olufaka ifom yokubuyisa yerhafu ibhalansi elungileyo. Njengesiqhelo, abantu abaninzi babelindele ukuba imali izakubuyiselwa kwiiakhawunti zabo kwisithuba seentsuku ezi-5 zeshishini, nangona kunjalo abantu abaninzi abanayo imali kwiiakhawunti zabo ngelo xesha.
Oku kuqala ukuvusa umsindo phakathi kwabantu, abathi, kude nokuthatha izinto kancinci kwaye babone imeko yabo ngokwahlukeneyo, baqale ukuba nomsindo.
Intsalela yemali mboleko yabarhafi ngeentsuku ezi-5
Nangona i-hacienda isitsho kaninzi kwakhona ukuba imali eseleyo ngetyala iya kuba ilungele abahlawuli berhafu zingaphelanga iintsuku ezi-5Inyaniso kukuba oku kucinga kuphela kubantu abahlawula irhafu kwisiseko somvuzo. Ngamanye amagama, olu luvo lweentsuku ezi-5 lwenziwe ngenjongo yokukhuthaza abantu abaqhelekileyo abangazifakiyo iifom zerhafu yengeniso, ukuba benze njalo.
1 Ukubuya okuzenzekelayo
2 Ukubaluleka kwesibhengezo sonyaka kubasebenzi
3 IHacienda inokuwuguqula lo mhla
4 Amanye amatyala anokulibazisa ukubuya kwakho
5 Indlela yokwenza ibango lokubuyiselwa imali kwirente
6 Isibhengezo silindile
7 Isibhengezo esirekhodiweyo kunye nokuqinisekiswa kwedatha.
8 Ukubhengezwa kwengeniso kuyenziwa
9 Imbuyekezo yakho ikhutshiwe
10 Kuthekani ukuba intlawulo yam ayifikanga
Iimeko ze ukubuya ngokuzenzekelayo, ezenziwa kubantu abagcina imbuyekezo yabo yonyaka ngexesha, basebenzise kuphela iibhalansi ezihambelana neerhafu zangaphandle hayi iirhafu ezirhafiswa kwimisebenzi yabantu bendalo, kunye namatyala okwahlukaniswa okanye ukubonelelwa kweenkonzo. Kwaye abangeni kulonwabo lwempahla.
Ukubaluleka kwesibhengezo sonyaka kubasebenzi
Nangona kunjalo kukho umthetho, imiqathango emiselweyo ukuze ipropathi inyanzeleke ndikubuyisele imali yakho ngemali eseleyo. Kubalulekile, nokuba ubhengeza ingeniso ngonyaka okanye akunjalo, ukuba ucace malunga nale mihla ibekiweyo.
Umthetho ucacisa ukuba, ukuba yonke into ihamba kakuhle kwingxelo yethu yengeniso kwaye akukho hlobo lwesitenxo lufumanekayo, imali inokugcinwa kwiakhawunti yebhanki, kwi Ixesha alikho ngaphezulu kweentsuku ezingama-40 ukusukela kumhla obhatala irhafu ecele ngayo imali eseleyo egameni lomhlawuli werhafu.
IHacienda inokuwuguqula lo mhla
Ewe, uNondyebo angawuguqula lo mhla, ukuba uthathela ingqalelo ukuba kufuneka acele ubungqina kumrhafi werhafu ngemvelaphi yentsalela ekuthethwa ngayo. Oko kukuthi, ungacela ubungqina kumrhafi werhafu ye ukunyaniseka kwengxelo yakho kwaye eli ke linelona xesha liphezulu le- Iintsuku ezingama-20 zokuhambisa onke amaxwebhu. Phakathi kwezinto izinto ezinokufunwa lilifa yile: idatha yomrhafi, iingxelo zedatha ebonelelwe kwingxelo yengeniso okanye nayiphi na enye ingcaciso eyongezelelweyo apho ifa ibona iyimfuneko ukuqinisekisa imvelaphi yale mali ichaziweyo. Nokuba umrhafi uhambisa onke amaxwebhu, umrhafi angagqiba ekubeni angayiniki imali umhlawuli werhafu, kuba idatha ayibonisayo loo mntu ayiboni eyokwenyani.
Ukuba yonke into ichanekile kwaye umntu uhambisa yonke idatha ngokuchanekileyo, uNondyebo uneentsuku ezimbalwa zokunika imali emva kokuba amaxwebhu sele ezisiwe.
Kwimeko apho umrhafi ahambisa onke amaxwebhu kodwa uNondyebo esafuna ngaphezulu ukuqinisekisa ubungqina bemvelaphi, baya kunikwa entsha ngaphakathi kweentsuku ezili-10 ukuhambisa amaxwebhu amatsha aceliweyo. Ukuba emva kweli xesha, uNondyebo akanakukwazi ukuqinisekisa imvelaphi yakhe, uya kuyaliwa ngokuzenzekelayo.
Amanye amatyala anokulibazisa ukubuya kwakho
Ukuba uneempazamo ezininzi
Kwimeko apho umrhafi abonisa ingxelo yengeniso apho kubonakala ngokucacileyo ukuba uneempazamo kwidatha ekuyo, uNondyebo unegunya lokucela umrhafi ukuba acacise lonke ulwazi ngokubhala zingaphelanga iintsuku ezili-10. iphepha kunye nokuzisa.
Ezi mpazamo zinokuba loluphi na uhlobo, ukusuka kwifayile ye- ingxaki kwiakhawunti yebhanki yokubuyisa (Oko kukuthi, iinombolo azihambelani nezo sele uzenzile) kwidatha yobuqu osunayo malunga naloo mntu.
Kwimeko apho ingxaki ikumanani anezixa ezibuyisiweyo, uNondyebo akazukufuna ukucaciselwa umhlawuli werhafu kwaye uyakubuyisa esona sixa siphawulwe yinkqubo yakhe, ngaphandle kokubiza umrhafi ukuba enze ingxelo eyongezelelweyo.
Uyenza njani ingxelo yengeniso?
Ubona njani, hacienda ungawandisa umhla weentlawulo zakho ngaphaya kweentsuku ezi-5 kwaneentsuku ezingama-40 ngokomthetho, ukuba nje ungangqina ukuba ingxelo yengeniso efakwe ngumrhafi ayichanekanga.
Kwimeko apho, emva kokungenisa eyakho ingxelo yengenisoEmva kweeveki ezimbini zidlulile kwaye noNondyebo engakhange aqhagamshelane nawe, kusenokwenzeka ukuba akukho ngxaki ngengxelo yakho yomvuzo kwaye kuhlala kuphela ukulinda ukuba imali ibekwe kwi-akhawunti yakho ngokuzenzekelayo. Khumbula ukuba, ukuba akukho mntu uqhagamshelana nawe ukuba ucele amanye amaxwebhu, ixesha ngokomthetho ziintsuku ezingama-40 zeshishini ukuze ukonwabele imali yakho
Kwenzeka ntoni xa ukwala ukubuya kwam kodwa ungandixeleli ukuba kutheni
Oku, nangona kungaqhelekanga, kwenzekile, kushiya abantu ababelinde imali yabo bengazi apho banokuthi mabasombulule le ngxaki. Inyaniso, Uninzi lwabantu lubuyisiwe ngaphandle kokuxela Kwaye bafumanisa xa beqala inkqubo yebango.
Kwimeko apho sinale ngxaki, sinakho ukubanga, kuba ngokomthetho, uNondyebo kufuneka asazise ukuba ukubuya kwethu kwakhatyiwe kwaye kwakutheni. Kule meko, kuya kufuneka uvule ifayile ye- ingxelo ngokuchasene nemali Ukuchaza ukuba kutheni ukubuya kwakho kukhatyiwe kwaye ngawaphi amaxwebhu ekufuneka bewaqinisekisile. Ukongeza ekunikezeleni ixesha leentsuku ezingama-20 zokusebenza ukuhambisa amaxwebhu.
Kwimeko apho i-hacienda ingangenisi imali yakho kulo nyaka umiyo, intlawulo kufuneka yenziwe ngendlela efanayo, nangona kunjalo i-hacienda kufuneka yongeze kwimali esele ichaziwe yokuhlawula i-3,75% yenzala.
Indlela yokwenza ibango lokubuyiselwa imali kwirente
Akunakwenzeka ukwenza ibango kwilifa elinjalo, kuba iqonga alilivumeli eli nyathelo, nangona kunjalo ukuba sinokuphonononga imeko yethu kwilifa kwaye sibone ukuba yonke into isalungile, kuba njengoko besitshilo phezulu, ngamaxesha athile UHacienda uyakwala ukubuya kodwa ayikwazisi umhlawuli werhafu.
Ukuze uyazi ukuba liphi ibango lakho, siza kukuxelela ngemiyalezo enokuvela.
Olu khetho luphuma xa uxwebhu lwethu sele lusefama, nangona kunjalo, abakajongi isicelo sethu.
Isibhengezo kunye nemali eqhubayo. Jonga isixa.
Oku kuphuma xa iimpazamo zifunyenwe kwingxelo yethu yengeniso. Ngokwesiqhelo, kwezi meko, isibhengezo kufuneka siphinde senziwe ngokutsha okanye ukuba sisexesheni, nxibelelana noNondyebo ukuqinisekisa ukuba zeziphi iimpazamo.
Isibhengezo esirekhodiweyo kunye nokuqinisekiswa kwedatha.
Oku kubonisa ukuba ifama ijonga ingxelo yengeniso
Ukubhengezwa kwengeniso kuyenziwa
Kule meko, isibonisa ukuba isibhengezo sele silungisiwe kwaye uNondyebo uyavumelana nedatha kunye nembuyiselo eceliweyo. Kule meko, sinokulinda kuphela ukuba ifama isixelele ukuba loluphi usuku imali yethu eza kufakwa kwiakhawunti.
Imbuyekezo yakho ikhutshiwe
Imali yakho sele ikhutshiwe. Ukuba ngaphakathi kweentsuku ezili-10 awukayifumani imali obuyilindele, kuya kufuneka uye kulawulo lwakho kunye nedatha yedilesi yakho yerhafu; Nangona kunjalo, ayisiyomfuneko oko kuba i-hacienda ikhuphe intlawulo.
Kuthekani ukuba intlawulo yam ayifikanga
Olona khetho lulungileyo kukuza kwi-ofisi yethu yerhafu ekufutshane, apho abo banoxanduva lwendawo leyo baya kuba nakho ukusixelela ukuba ithini imeko yeakhawunti yethu okanye kutheni singakhange siyifumane intlawulo kwaye kufuneka siqhubeke njani.
Ukuba i-hacienda iyakuhoya okanye ikunika ixesha elide, ungaya njenge indawo yokugqibela eya kwi-AEAT kwaye kukho ibango. Ukuze ukwazi ukuyenza ngeli qonga, kuya kufuneka ubenotyikityo lwedijithali, kungenjalo ngekhe ukwazi ukuyenza.
Nangona oku kungazukukhawulezisa ukuhlawula, kuba akukho nto iyakukhawulezisa, siya kufumana umyalezo ovela kuthi oza kusixelela ukuba kwenzeka ntoni kanye ngenkqubo yethu nokuba siza kuyifumana na intlawulo, nangona ukulinda end, iyafana kuye wonke umntu.
Zingaphi iirhafu esihlawulayo thina baseSpain?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Umgaqo-nkqubo wezemali » Kuthatha ixesha elingakanani ukubuyisa imali
filip mihaela sitsho
Molo, ingaba ndiyazi ukuba ingena ixesha elingakanani imali yerenti? Ndineveki apho ixesha elimiselweyo lifanelekile kwaye akukho nto ingxamisekileyo xa ndibeka umvuzo kwiakhawunti yam yebhanki, enkosi.
Phendula kwi-filip mihaela
USusana Maria Urbano Mateos sitsho
Molo Filip, andinakukunika umhla ochanekileyo, kodwa ukuba uthumele isibhengezo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye sisixa-mali esiza kubuyiselwa ngaphantsi kwe-1500 euros, uya kusithathela ingqalelo kungekudala.
Molo, ndingumphambukeli, ndinomtshana wam kwaye ndihlala nentombi yam eneminyaka eli-16 ubudala nonyana wam oneminyaka eli-18 ubudala ngenxa yeemeko ezahlukileyo ndingakhange ndikwazi ukufumana umtshana wabo kubo ngoku ifama ibango lokuba abanaye umtshana ukuze bangabuyi ndingenza ntoni?
Molo Rudy, ukuba ubandakanya abantwana bakho kwirente, ekufuneka uyenzile kuba irhafisiwe, kufuneka babe ngabemi abane-NIE okanye i-Nif, ukuba bangaphezulu kweminyaka eli-14 ubudala kufuneka uhlasele i-NIF okanye i-NIE yabo . Ukuba ubabandakanyile kwaye abanayo i-NIE, kuya kufuneka uyikhuphe okanye uye kwi-Arhente yeRhafu kwaye wenze eyongezelelweyo kwaye uyisuse kwingeniso. Yiyo kuphela kwendlela yokuyifumana kwakhona, kuba awunayo i-NIE awunako ukuyifaka, nokuba awunyanzelekanga ukuba uyibeke kwirente. Ndikucebisa ukuba wenze idinga kwi-Ofisi kaNondyebo kwaye wenze eyongezelelweyo kwaye uzame ukusombulula i-NIE yakho ngokukhawuleza. Konke okugqibelele
Kuxhomekeka kwipropathi, kodwa ukuba ayikho ngaphezulu kwe-1500 euros, ayizukuthatha ixesha elide ukungena kuwe, ungangena kwiphepha lepropathi kwaye ubone imeko yembuyekezo yakho.
UJulio Miguel sitsho
Molo, bendifuna ukwazi ukuba uthetha ukuthini xa usithi uNondyebo uneentsuku ezingama-40 zokusebenza ukuze abuyise imali.
Molo uJulio, akukho mthetho uthi ziintsuku ezingama-40, ngaphezulu, banokukubuyisela kunyaka wekhalenda kude kube nguDisemba 31, kwaye ukuba unyaka wekhalenda uyadlula, kuya kufuneka kusetyenziswe inzala ehambelana nayo. Kodwa ukuba kuyinyani ukuba ubhengeza isibhengezo sokuqala, kuqikelelwa ukuba sibuyisiwe kwisithuba seentsuku ezingama-40, sithetha ngembuyekezo yemali engaphantsi kwe-1500 euros. Ayisiwo umthetho, okanye ibango, kodwa ihlala ibuyiswa ngexesha elifutshane.
Mholweni!! Ndingathanda ukwazi ixesha elithathayo ukubuya ukuba ngaba ngokubonisana nokubuyela kwam bandixelela ukuba nge-3 kaMeyi kwenziwa ugqithiselo kunye nokubuyela kwam kwiakhawunti yam yebhanki.
Mholweni, kwaye enkosi kakhulu
Ewe, umbuzo uphawula nge-3 kaMeyi, kuya kufuneka sele unayo kwiakhawunti yakho, jonga ukuba ichanekile na, kuba eso saziso siza xa ukubuyiselwa kwemali sele kuthunyelwe ebhankini yakho, kwaye ukuhanjiswa kwemali kuthatha ubuninzi be-3 Iintsuku ukuba zizinto ezahlukeneyo, ukuba ibizizinto ezifanayo, kwangaloo mini ubuya kuba nazo. Jonga iakhawunti, kubaluleke kakhulu, xa kukho impazamo, kuya kufuneka unxibelelane neArhente yeRhafu.
ENazarete Ortiz osorio sitsho
Molo, ndiye ngoMeyi 11 ukuyokulungisa ukubuya kwam kwirhafu, kodwa ukuza kuthi ga namhlanje, ukubuya kwetax kusaqinisekiswa kwaye andikuqondi xa besenza uhlengahlengiso kum. Ndimele ndilinde ixesha elingakanani ukuba kubuyiswe imali engaphantsi kwama-euro angama-500?
Phendula u-Nazaret Ortiz osorio
Imbuyekezo yokulungisa ithatha ixesha elide, kuba ihlala isemva kwezo zikhutshiweyo, kuya kufuneka ulinde iArhente yeRhafu ukuba iphinde ihlole ezo zikhutshiweyo kwaye iqale ngokutsha. Ndiyathemba ukuba baya kukubuyisela kwakamsinya, ungafumanisa kwakule webhusayithi inye apho ubona ukuba iphantsi koqwalaselo, iya kukubeka oku kulawulwa, okanye ubuyiselwe.
Ndiyathemba ukuba bazokubuyisa kwakamsinya, imibuliso
Mholweni. Izolo bendisenza ingxelo kwiiofisi zerhafu kwaye bayifumana gwenxa. Silusapho olukhulu kulawulo ngokubanzi, umyeni wam sele eqokelele ingxelo yakhe nge-euro ezingama-600 zokuncitshiswa kosapho olukhulu kwaye eyam inxenye ibilahlekile, kodwa bandixelele ukuba andizifezekisi iimfuno zokuyibala ngokupheleleyo kwaye Ndinganika ilungelo kuye lokuba ahlawulise. Ndicinga ukuba yile nto bayenzileyo, kunye nokulungiswa kwesibhengezo sabo ukuze bangene kwi-euro zam ezingama-600. Isibhengezo sam senziwe kum ngokukodwa, kodwa xa besijonga ekhaya, khange babonise ibhokisi endikunika yona. bona kwaye bayandishiya Ukubuyisa i-euro ezingama-400 kum. Ngaba bathatha ixesha elide ukubuyela kulungiso kuye? Andazi nokuba ndiyayilungisa na eyam okanye eyakho. Enkosi
Molo, sele unolwaphulo-mthetho lokuba kwi-Arhente yeRhafu efanayo, bayabandakanyeka kwisibonelelo se-1200 ye-euro yosapho olukhulu. Okokuqala, ndikucebisa ukuba ucele intlawulo yenyanga, nokuba yeyakho kwiakhawunti yakho okanye leyo yeqabane lakho, oko kukuthi, i-100 euro ngenyanga, ukuba uqaphele kancinci kodwa sele uqokelele kwaye uyaziphepha ezi zinto. Kwimeko yokuba isonjululwe kulo nyaka, iyatsalwa kwirente, kodwa andiqondi ukuba kutheni ungafikeleli kuyo ukuba iqabane lakho linakho. Ukuqukumbela, ukuze uxhamle kwi-euro eyi-1200, kuya kufuneka uthabathe abantwana i-100%, kuphela iqabane lakho okanye umyeni wakho. Ngokwesiqhelo, i-50% iyatsalwa ngomntwana ngamnye, ngaphandle kokuba omnye kwaba babini urhoxa ngenxa yomnye
Eyona nto unokuyenza kule meko kukuba basilungise isimemezelo esichanekileyo, kuba ekugqibeleni banokukubuza ukuba ucaciselwe ngokwabo. Kwelinye icala, umhla wokubuya uyahluka kakhulu njengesilungiso, ngokuthetha ... ibekwa emgceni kwakhona. Ndiyathemba ukuba kunyaka ozayo, oku akwenzeki kuwe, imibuliso
patricia molina martin sitsho
Molo, molweni ekuseni, bendifuna ukwazi ixesha elithathayo ukwenza imbuyiselo yerenti endiyenzileyo ngoMeyi 6? Enkosi
Phendula patricia molina martin
Molo Patricia, inyani kukuba awukho umhla ochanekileyo, banaye kude kube ngu-Disemba 31 kodwa ukuba isibhengezo sakho sisekwe kwidatha yezemali ye-arhente yerhafu, okanye uqinisekisa uyilo, kungathatha iveki ukuya kwiintsuku ezingama-40. Ukuba uthengisile okanye ubandakanya nakuphi na ukubamba okungaziwa kwiarhente yetax, zihlala zithatha ixesha elide. Umzekelo, kundithathile iintsuku eziyi-8.
Molo, ndiyamkele idrafti ngomhla we-5/5/17 kwaye ithi; Ifom yakho iyalungiswa, ukuba unqwenela, ungazijonga izikhalazo zakho …… Ngaba kuyinto eqhelekileyo leyo?
Molo Cristina, uphakathi kwexesha eliqhelekileyo, ukuba wenze intengiso yeempahla zezimali ezinjengemali, isitokhwe okanye ukuthengiswa kwezindlu, kuhlala kuthatha ixesha elide. Isibhengezo sokuba babuya kuqala zezi ziphantse zaqinisekisa ulwazi lwerhafu lukaNondyebo okanye ingeniso yewebhu.
Ndiyathemba ukuba bakubuyisele kwakamsinya, qhubeka ujonge imeko yakho kunye nayiphi na imibuzo apha.
Molo, ngomhla we-12 ndenza isibhengezo eofisini caixa kwaye kwaphuma ukubuyisa i-euro ezingama-800, bandixelela ukuba ngeentsuku ezili-10 bandibhatele, ukusukela namhlanje abakayihlawuli.
UManuel Yesu Martínez Batista sitsho
Molo, umbuzo wam unzima ngandlela ithile okanye ndicinga njalo. Ukusukela ngo-2009 ndenze ingxelo e-Bizkaia hacienda ngezizathu zomsebenzi, kodwa ukusukela ukuphela konyaka ka-2015 bendihlala eMalaga ke kulo nyaka kuye kwafuneka ndiyenzele unondyebo wombuso, ndiyinikezela ngomhla we-18 kwaye andikafumani kwiakhawunti yam okwangoku, kuyinto eqhelekileyo? Isixa sokubuyela? idlula i-euro ezingama-2000. Ndiyabulela kwangoko
Abafana bakaMari sitsho
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndenza isibhengezo nge-24 kaMeyi kwaye abakandibuyisi.
Lingakanani ixesha endimele ndilinde?
Phendula u-Marí nieves
Ndenze isibhengezo nge-26 kaMeyi kwiofisi egunyazisiweyo, kuphela ngoncedo olunikezwe liBhunga lesiXeko kwiintsapho ezinengeniso encinci olutshintshiwe kwaye ukuza kuthi ga kulo mhla, phantse inyanga, imeko yam iyaqhubeka ukuba "isibhengezo sakho siyenziwa kusetyenzwe. Ngaba kuyinto eqhelekileyo?
Ukubuya kwam kwafakwa ngo-Epreli kwaye akukabuyiselwa kum. Ixabiso li- € 1.600, ngaba liqhelekile?
Molweni, nge-26 kaJuni, ndenza ingxelo.Kude kube namhlanje, andizange ndamkelwe, ingaba yinto eqhelekileyo?
Ndenze ingxelo nge-5 kaMeyi kwaye ngomhla we-7 yayiqinisekiswa kwaye namhlanje yonke into iyafana.
Molo, umbuzo, ndinike ingxelo yam yengeniso ngomhla we-4 kodwa ndiphazama, endaweni yoko ndibeke ukuba ndiyifumene imali yosapho olukhulu ebendingakhange ndilufumane, ndiyilungisile kwaye ndiphazama kwakhona kuba ndibeka oko Ndisebenze inyanga ebendingenayo ndifikelele kwixabiso elisezantsi ndaza ndaya e-ofisini yam wandixelela ukuba mandithumele eyongezelelweyo kwaye ekugqibeleni indihambele kakuhle, iphuma ibuyisa i-1.083 yeerandi kwaye undixelela ukuba ingxelo yam isalindile ingathatha ixesha elingakanani?